လက်ကိုင်ပုံကိုင်နည်းကပြောပြနေတဲ့ သင်တို့စုံတွဲရဲ့ ဆက်ဆံရေးအကြောင်း – Trend.com.mm
လက်ကိုင်ပုံကိုင်နည်းကပြောပြနေတဲ့ သင်တို့စုံတွဲရဲ့ ဆက်ဆံရေးအကြောင်း
Posted on January 22, 2018 by Wint
ချစ်သူရှိရင် လက်ကလေးကိုင်ပြီး လမ်းလျှောက်ရတာလောက် ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ရှိဦးမလား? သင်က သတိမထားမိလို့သာ… ဒီလိုသေးငယ်တဲ့ အပြုအမူလေးတွေက သင်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကို ဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? ကဲ.. ဖော်ပြပါ လက်ကိုင်ပုံ ကိုင်နည်းလေးတွေကြည့်ပြီး စာဖတ်သူတို့စုံတွဲကလည်း ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲ..ဟုတ် ၊မဟုတ်ဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်!
(၁) လက်ဖဝါးချင်းအပ်ပြီး ကိုင်ထားရင်
သင်တို့စုံတွဲဟာ ဒီလိုမျိုးလက်တွဲလေ့ရှိတယ်ဆို သင်တို့ဟာ ရမ္မက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအခြေခံပြီး လက်တွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ပြင်းထန်တဲ့ သံယောဇဉ်ရှိပြီး နှစ်ယောက်လုံးက ကိုယ်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ကိုယ်နေထိုင်လိုသူတွေဖြစ်တယ်။
ချစ်စိတ်ရမ္မက်တွေရော၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပါ ရောပြွန်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ စုံတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးလက်ကိုကိုင်ထားရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘယ်တော့မှ လက်မလွှတ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ တစ်ယောက်ကတင်းကြပ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားပေမယ့် အခြားတစ်ယောက်လက်က လျော့တိ
(၃) လက်ချောင်းချင်း ချိတ်ထားရင်
ဒီလိုလက်ကိုင်လေ့ရှိတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်လွတ်လပ်မှုကို တစ်ယောက်တန်ဖိုးထား နားလည်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေအပေါ် နားလည်ပေးထားပြီး အပြန်လှန်လေးစားမှုလည်းရှိတယ်။ ဒီလိုအတွဲက ပြတ်သွားရင်တောင် သူငယ်ချင်းအနေထားမျိုးနဲ့ဆက်လက်ကျန်ရှိနေဦးမှာပါ။
(၄) မိန်းကလေးလက်နှစ်ဖက်က ယောက်ျားလေးလက်တစ်ဖက်တည်းကိုကိုင်ထားရင်
ဒီလိုလက်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင် သင်တို့ဟာ အတည်တကျတွဲနေတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ ဒါဟာ အမြဲတမ်း ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုတော့ာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်တည်းဖက်ကပဲချစ်သူအပေါ်အသည်းသန်စွဲလမ်းနေတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မေတ္တာမျှလို့တွဲနေကြတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
ပွဲတွေတက်တဲ့အခါ ဒီလိုလက်ချိတ်ပုံမျိုးကို အတွဲတွေကြားမကြာခဏတွေ့ရပါတယ်။ နေ့တိုင်းလည်း ဘယ်သွားသွားဒီလိုလက်ချိတ်လေ့ရှိတယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်ကိုယ် တစ်ယောက် ကာကွယ်တယ်၊ လုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။
(၆) နှစ်ယောက်လက်တွဲထားပေမယ့် တစ်ယောက်ကအမြဲအရှေ့ရောက်နေရင်
ဒီလိုစုံတွဲမျိုးကို မျောက်စုံတွဲလို့ခေါ်ရမလား… ။ စိတ်အပြောင်းလဲမြန်လို့ ဟိုသွားမယ်၊ ဒီသွားမယ်နဲ့ နှစ်ယောက်သား သွားချင်တဲ့နေရာတွေများလို့ မသွားလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာမကောင်းတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုစုံတွဲတွေဟာ ပွင့်လင်းတယ်။ ပြောမနာ၊ ဆိုမနာအတွဲလို့
လက်တွေလုံးဝမကိုင်ထားဘူးဆိုရင်တော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားသွေးအေးနေပါပြီ။ ဒါမှမဟုတ် လူကြားထဲအဲ့လိုလက်တွဲသွားရတာကို ရှက်ကြောက်နေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချီတုံချတုံဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်။ သွေးအေးသွားမှာစိုးလို့ စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ သင့်မိန်းကလေးဘက်က ရှက်ကြောက်နေတာလည်းဖြစ်မှာပါ။
ကမ္ဘာ့အထင်ကရအဆောက်ဦးတွေကို စတင်ဆောက်လုပ်စဉ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ တဲ့ ရှားပါးဓာတ်ပုံများ…
ပဲရစ်မှာကျင်းပတဲ့ Dior Fashion Show ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Song Song Couple